ဆၧအၪ့စၪ့ဘၪဆဲၫ့ ဆၧဂဲထုၪ့မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့လၧဆၧၥံၫ. | Radio Veritas Asia
ၦစၭဒုၫစံၫလၧအစံၭဝ့ၫ, ဆၧဂဲထုၪ့ထဲၩ့လအီၪဘၪ လနၩ့နၩ့လ့ၩလၧအအီၪတၭ, အၪ့စၪ့အဝ့ၫ,- စံၭ ဝ့ၫ, ဆရၫဧ့, စမိစ့ၭကွ့ၭန့ပလံၬ, စံၭဝ့ၫ, ၦလဂၩဂၩ အထၧၫ့ဖုဝဲလၧအအီၪလၧအမၫအ့ၪၥံၫတၭ, ထီးအ ၥံၫနီၪအဖိၪအ့ၪလအီၪဘၪတၭ, အထၧၫ့ဖုဝဲဘၪအီၪ ဎုၬလၧအမၫတၭ, ဘၪမၩအီၪထၪ့န့ အထၧၫ့ဖုဝဲအချံၫ အၥၪလီၫ.
မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ၦထၧၫ့ဖုဝဲခွၫအီၪနွ့ၫဂၩလီၫ. အခၪ့ထံၭလဂၩန့အမၫတၭ, အဖိၪလအီၪဘၪၥံၫဝ့ၫလီၫ.- နံၫဂၩလဂၩမၩန့အမၫတၭ, အဖိၪလအီၪဘၪၥံၫဝ့ၫလီၫ.- ၥၧၫ့ဂၩလဂၩမၩန့ဝ့ၫတၭ, ဆၧမၩအၥၭ ဘဲၫနီၪဆ့နွ့ၫဂၩလူၬတၭ, အဖိၪလအီၪလၩ့ထးဘၪနီၪၥံၫဝ့ၫဒၪလီၫ.- တၭလၧခဲၫ့ထုၬၦမုၪလဂၩၥံၫဝ့ၫဆ့လီၫ.-
မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, လၧဆၧဂဲထုၪ့ထဲၩ့အဖၧၩ့ နီၪ,မွဲအမိကဲၪထဲၩ့လၧၦလဖၪနီၪ အမၫလဂၩဂၩလဲၪ. အဂဲးဘဲၫယီၩၦနွ့ၫဂၩနီၪန့အမၫလၧအဝ့ၫလီၫ. ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧလၧအဝ့ၫၥံၪတၭ, စံၭဝ့ၫၦအ ယီၩလကၠၪဖိၪအီၪဎုၬတၭ, ဒုၭအီၪဎုၬလိၬအၥၭလီၫ.
အ့ၪမွဲၦၡၩလၧအဂ့ၩဒိၭန့ဝ့ၫလၧနးကၠၪဒီၭ, ဒဲဆၧဂဲထုၪ့ထဲၩ့လၧဆၧၥံၫအဖၧၩ့လဖၪနီၪ, အီၪဎုၬလၧၩ့အ့ၬ. ဘၪဆၧဒုၭအီၪဎုၬလိၬအၥၭဆ့အ့ၬ.- တၭအဝ့ၫၥံၪၥံၫၥ့ၪလၧၩ့ဆ့အ့ၬး အဂဲးဘဲၫယီၩ မွဲဘဲၫအၥီၫ့ လဖၪအၥိၭတၭ, မွဲဆၧဂဲထုၪ့ထဲၩ့အဖိၪတၭ, မွဲယွၩ အဖိၪလီၫ.
မွဲလါနၫ့ဘိၩ လၧၦၥံၫမိဂဲထုၪ့ထဲၩ့နီၪ, စမိစ့ၭဒုၭနဲၪ လၧဆၧၡိၬအဖၧၩ့ ထီးအကိၭယွၩလၧစအၫဘြဟၫ့ အယွၩ, လၧစအံစၭအယွၩ, လၧစယၫကူၭအယွၩနီၪလီၫ.- လမွဲဘၪၦၥံၫအယွၩတၭ, မွဲၦမၧၫ့အယွၩလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦထီးအလူၬမၧၫ့ဝ့ၫလၧအဖၧၩ့လီၫ.
ၦကွ့ၭလံၬၥံၪ လနၩ့နၩ့ချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ, စံၭဝ့ၫ, ဆရၫဧ့, နစံၭဆၧဂ့ၩမၬလီၫ.- ၦအၪ့စၪ့အဆၧဘုၪ့ လၧၩ့နးဂၩအ့ၬ.